INTETHO YEBHAJETHI YEMFUNDO
ULWESIHLANU, WE-19 MEYI 2006, NGO-14H15
KWIPALAMENTE YEPHONDO KWINDLU YOWISO-MTHETHO
Intetho yebhajethi yoMphathiswa weMfundo waseNtshona Koloni, uCameroon Dugmore
Malungu eBhunga lesiGqeba soLawulo
Malungu aHloniphekileyo eNdlu yoWiso-mthetho yePhondo
Ntsumpa-Jikelele yezeMfundo nani nonke magosa amakhulu angamanye eSebe leMfundo leNtshona Koloni
Zindwendwe ezimenyiweyo ezivela kwicandelo lezemfundo
Maqabane, ziHlobo noSapho lwam
Somlomo – kuluvuyo kum ukuba ndithi thaca kule Ndlu namhlanje, uhlahlo-lwabiwo-mali lweMfundo lwesithathu ngethuba lolawulo lukaRhulumente wePhondo.
Oku ndikwenza ndiyiqonda kakuhle into yokuba kwezi veki zimbalwa zidlulileyo besibhiyozela unyaka we-12 woSuku lweNkululeko, sabhiyozela uSuku lwaBasebenzi lukaZwelonke okanye uSuku oluyi-May Day, kwaye kule veki iphelileyo besibhiyozela isiKhumbuzo soNyaka we-10 sokwamkelwa koMgaqo-siseko yiNdlu yoQulunqo loMgaqo-siseko (Constitutional Assembly) nge-8 Meyi 1996.
UMqulu wamaLungelo oLuntu uchaza ukuba wonke umntu unelungelo lemfundo esisiseko, kuquka imfundo yabadala esisiseko kwakunye nemfundo eqhubekayo, nekufuneka urhulumente ngamanyathelo angawengqiqo, enze ukuba ifumaneke kwanokuba wonke umntu afikelele kuyo.
Wonke umntu unelungelo lokufumana imfundo ngolwimi lwaseburhulumenteni okanye iilwimi azikhethayo kumaziko emfundo oluntu apho imfundo iyinto enokwenzeka ngokwengqiqo. Ukuze siqinisekise ufikelelo olusebenzayo kweli lungelo kwanokuphunyezwa kwalo, urhulumente makathathele ingqalelo onke amanyathelo angamanye ezemfundo angawengqiqo, kuquka amaziko afundisa ngolwimi olunye ukuze kuthathelwe ingqalelo -
ukuba nokwenzeka kwakunye
nemfuno yokulungisa iziphumo zemithetho yocalucalulo kwanezenzo zocalucalulo zexesha elidlulieyo
Namhlanje ndinqwenela ukunika ingxelo kule Ndlu nakubemi beli phondo malunga nempumelelo esele sifikelele kuyo. Ndifuna ukudwelisa imingeni esisajongene nayo. Ndifuna ukubhengeza isiCwangciso somSebenzi sethu. Ndifuna ukwazisa amalungu eli Gqiza liza kusebenza ukuze sizalisekise amaphupha neminqweno yabantu bethu, njengoko kucacisiweyo kuMgaqo-siseko.
SIKUMSOBOMVU WETHEMBA LEMPUMELELO- ITHUBA LETHEMBA
UMongameli uThabo Mbeki usikhumbuze ukuba kwiminyaka embalwa edlulileyo amaqondo okuhla nokunyuka kwamaxabiso namaqondo enzala asezantsi ngolona hlobo, kwakunye nokuba ingqiniseko yoshishino nomthengi ikwelona qondo liphezulu.
Ngokwenyani, kwezi nyanga zokugqibela ziyi-87 zilandelayo ngoku, ilizwe lethu libe namava okuqhuba kakuhle nokukhula koqoqosho okuqhubekayo, nto ke leyo eyimbali xa kuthelekiswa namanye amazwe asahlumayo. Yiyo loo nto uMongameli ebhengeze ilizwe lethu njengelizwe elingena kwi "Nkulungwane yeThemba".
KwiNtetho yakhe yePhondo iNkulumbuso u-Ebrahim Rasool wathetha wenjenje …"simi kumsobomvu wethemba". Ukukhula okunentsingiselo kumacandelo kubangele iqondo lokukhula le-5.3% kwiphondo iminyaka emibini ilandelelana. Uqoqosho lwengingqi olusebenzayo lutsale utyalo-mali lwamazwe angaphandle oluthe ngqo oluyi-R1.4 bhiliyoni ku-2005.
Kwinkcazelo yebhajethi yeNkulumbuso, ucacise ngokunabileyo malunga noku esebenzisa inkcazelo kaJohn Berger ecaphula u-Antonio Gramsci ekwaqwalasele nokuba u-Gramsci "wayekholelwa kwithemba kunakwizithembiso kwaye ithemba yinto yethuba elide". Ndifuna ukuyinabisa le mbono yethemba kancinane nje. U-Vaclav Havel (1936-) owayengumongameli waseCzech Republic, nombhali odumileyo wemidlalo ekwayimbongi, nowayekwangomnye weenkcuba-buchopho eyintshatsheli nakwiintshukumo ezixhasa ukugcinwa kweemfundiso ezisiseko, wathi:
Isicwangciso sethu sanamhlanje esigxininisa ngokukhulu kuluntu, siziswa kuwe Nkulumbuso, njengenyathelo lokuqala elisingise empumelelweni. Sifuna ukuthi thaca isicwangciso sethu sokusebenza.
Nkulumbuso, kukho izizathu ezininzi zokuba sibe nethemba. Kule minyaka imbalwa igqithileyo, lo rhulumente uqwasele amanyathelo ayimpumelelo kwezeMfundo, naquka amanye kula alandelayo:
Ukuthiwa thaca kwale bhajethi namhlanje kubonakalisa uzinzo olukhulu kwezemfundo eNtshona Koloni. Ukukhula ukususela kwintetho yam yebhajethi yokuqala ku-2004/05 ngu-22.8%; kwaye ukususela kwibhajethi engungundoqo ku-2005/06, ngu-11%;
Kule minyaka mibini idlulileyo kubekho ukwanda kwinani lezithuba ezabelwe isebe ukuya kufikelela ku-657, izithuba zengqesho ezongezelelweyo, ukunqandwa kodendo olungenzekayo kootitshala abayi-1,800 ku-2005;
Ukugqitywa kwezikolo eziyi-19 kwezo zihlwempuzekileyo zoluntu kwisithuba seminyaka emibini, kuthethe into yokuba kuye kwafakwa abafundi abangama- 200,080 kwaza kwaqeshwa ootitshala abayi-580. Kulo nyaka wekhalenda, zizikolo ezizezinye ezili-9 eziya kugqitywa, kwakunye nezi-2 phambi kokuphela konyaka-mali.
Ukuqaliswa kweNkcazelo yeKharityhulam kaZwelonke (National Curriculum Statement) (FET) kumaBakala 10 no-12, kwisithuba seminyaka emithathu elandelayo, kwavuseleleka ukumiselwa kweZikolo eziyi-28 ekugxilwe kuzo (28 Focus Schools) ku-2005. Ngokwenza oku injongo yethu kukubonelela ngamathuba ahlaziyiweyo kwabo bafundi baneemfuno ezikhethekileyo nabaneziphiwo phakathi koluntu olwaluvinjwe amathuba ngaphambili.
Sizandisile izikolo zeDinaledi neMathematika, iSayensi neThekhinoloji zaba yi-50 xa zizonke. Oku kuyinxalenye yenjongo yethu yokwandisa amanani abafundi abafunda ezi zifundo zezakhono ezinqabileyo;
Ukususela kulo nyaka, ziyi-419 kweziyi-424 izikolo ezamkele isimemo sokuba zibe zizikolo "Ezingahlawulisi fizi" ("No Fee" status.) Oku kuthetha ukuba abazali babafundi abamalunga ne-150.000 abavela kwizikolo zoluntu oluhlwempuzekileyo abayi kuba sentlungwini ngokuhlawula iifizi zesikolo, kungekudala. Oku mhlawumbi kulelona nyathelo libalulekileyo ekuzalisekeni kombono weTshatha yeNkululeko – wokokuba amasango emfundo nenkcubeko aya kuvulwa!
Kwakutsha nje siqeshe aBancedisi bootitshala abayi-510 ukuxhasa ootitshala besiGaba seSiseko kwizikolo ezihlwempuzekileyo kwiphondo ngokubanzi;
Akukho nasinye isikolo kwiphondo ngoku esingenawo umbane, kuquka nezo zikwezo ndawo zikude ezisemaphandleni;
Kunyaka wesibini kulo mjikelo, sesibone ukuqalisa konyaka wesikolo okuhambe ngaphandle kwamagingxi-gingxi, nento ke leyo ebe sisiphumo esithe ngqo soMkhankaso oyi-Early Admission Campaign neeNtsuku ezivuleleke kuye wonke umntu (Open Days). Ndiqinisekile ukuba kunyaka ozayo siya kuqhuba ngcono nangaphezulu;
Sibone izisombululo kwezona ngingqi zaziwa ngokuba ziindawo ezikhathazayo "hot-spot" kwindawo zokuhlala zabafundi ngenxa yokusebenzisana nezikolo zethu noluntu, sikhokelwe ngu-DDG John Lyners kunye naBalawuli bakhe abakhutheleyo ababini;
Phantse zonke izikolo zethu eziphakamileyo zineelebhu zekhompyutha;
Iprogram kazwelonke yokukhuthaza ootitshala abaneqhuzu ukuba bahlale beseziklasini, ukuwonga abo banezakhono ezinqabileyo kwanabo bafundisa kwiindawo ezisemaphandleni, nayo ibhengeziwe.
Ndiya kube ndinabe kamva ngezi ngongoma zingentla.
IMINGENI EYAHLALA INGUMNQANTSA
Umongameli utsho kuthi sonke ukuba…."move faster to address challenges of poverty, underdevelopment and marginalisation confronting those caught within the Second Economy, to ensure that the poor in our country share in our growing prosperity..."
Inkulumbuso isikhumbuze ukuba i-26.3% yabemi bethu ayinamisebenzi. Uninzi lulutsha, into ecacisa ukuba sijongene nomngeni ongaphaya omalunga nezakhono. INkulumbuso yasikhumbuza ukuba impumelelo yethu ingayezinzileyo ukuba siyakhula size sabelane ngeKapa. Ngoko ke asinako ukuba sithi cwaka nangona kukho kusonakala.
Umngeni wokoyisa ilifa localucalulo, uba sisinyanzelo xa ubani ephonononga izinga lokupasa lematriki ku-2005. Ngeli lixa izinga lokupasa kweli phondo belingatshintsha-tshintshi lingaphezu kwe-80% kule minyaka mihlanu idlulileyo, okuyinyaniso koku kokuba iziphumo zabafundi abaNtsundu nabeBala) kwi-HOR nezikolo ze-DET yangaphambili (ex-DET) ziyaqhubeka ukubonakalisa ukulingani okuphathelele kucalucalulo.
Besele siyicacisile into yokuba phantse isiqingatha sabafundi bethu siyaphuma kwimfundo ephakamileyo phambi kokuba sifikelele kwimatriki. Ngeli lixa uninzi luye lukhethe ukufunda kwiikholeji ze-FET okanye ezinye iintlobo zoqeqesho, uninzi luye lungabinako, luze ke ngoko lujoyine abo bangaqeshwanga nabangaqeshekiyo.
Kulo nyaka uphelileyo, abaviwa abangama-38 586 bazigqiba iimviwo eziyimfuneko kwimatriki. Abaviwa abangama-32,573 bapasa. Kweli nani, ngama-10 394 abapasa nge-Endorsement, abayi-6,595 bapasa nge-Merit ukuze abayi-2, 201 bapasa nge-Distinction.
Into etyhafisa ngakumbi kukuba abaviwa abayi-10,144 kubafundi abaNtsundu ababhala iMatriki, kuphela yi-2.38% eyapasa i-Accountancy kuHlelo oluPhezulu, xa kuthelekiswa ne-6% yabafundi beBala ne-21.3% yabafundi abaMhlophe. KwiMathematika kuHlelo oluPhezulu kuphela yi-3.9% abafundi abaNtsundu abapasayo, i-4.9% abeBala ne-30.2 abafundi abaMhlophe. Xa bebonke yi-4.3% abafundi abaNtsundu, 4,7% abeBala. Ne-26.7% abafundi abaMhlophe abapasa i-Physical Science kuHlelo oluPhezulu.
Emva kweminyaka elishumi, ezi nkcukacha-manani zenza ukuba sizibuze imibuzo engundoqo ngokuba zingabasebenzisa njani na oovimba nezibonelelo zethu. Umngeni esasijongene nawo kwiminyaka elishumi eyadlulayo usekho kwaye usekukuba kudaleke inkqubo yemfundo noqeqesho eqinisekisa ukuba abantu banako ukuziqonda izakhono zabo ngokupheleleyo nokuthatha inxaxheba enentsingiselo kuqoqosho, olwasekhaya nakwilizwe jikelele. Kufuneka siqule ukuze siyihlasele imeko eligalelo lobuhlwempu nokuthotywa kwesidima size siphucule ukusetyenziswa kolwazi lokufunda nokubhala emakhayeni ethu kwangaxeshanye.
Ngeli lixa isicwangciso sethu soLwazi lokuFunda nokuBhala noLwazi lokuBala siqulunqelwe ukujongana nalo mba kwixa elizayo, ngokuqinisekisa ukuba abafundi bazuza isiseko esiluqilima kwiMfundo eQhelekileyo noQeqesho phambi kokungena kwikholeji ze-FET, isiCwangciso sethu esiyi-Learner Attainment Strategy siqulunqelwe ukujongana noPhuhliso lweSikolo siPhela (Whole School Development).
Esi sicwangciso sinothotho lweeprogram ezisetyenziswayo ukujongana neemfuno zabafundi abasele bekho kwinkqubo, nabalungiselela iMatriki okanye abanenjongo zokuqhubela phambili nemfundo kwikholeji ze-FET ingakumbi izikolo ekujoliswe kuzo neziphumelele ngamazinga angaphantsi ko-60% kunyaka ophelileyo.
Esi sicwangciso sakhelwe phezu kwempumelelo yeProgram yeSebe leMfundo leNtshona Koloni yeZikolo eziThanda ukuFunda (WCED’s Learning Schools Programme). Ngeli lixa le program yenkxaso ibe negalelo ekunciphiseni inani lezikolo kolu didi, ezinye izikolo zisekwimeko yokuba zikufumane kunzima ukufikelela kulo msobomvu.
Nkulumbuso, ngokwenjenje ndibeka etafileni ikopi yesicwangciso sephondo ukulungiselela izikolo zethu eziqhuba kakubi, kwakunye nemizekelo yeethagethi ezibekwe zizikolo ezizodwa, ngokungqinelana nesicelo sakho xa wawutyelele izikolo ukuqala konyaka.
IKAPA ELIHLUMAYO NOPHUHLISO LWEZAKHONO ZOLUNTU
Urhulumente wethu ubhengeze isiCwangciso somSebenzi esiziingongoma ezisi-8 ukufikelela kwinjongo yokukhulisa uqoqosho lwethu ngeepesenti ezintandathu. Imiba engundoqo kwesi sicwangciso iquka i-Micro Economic Development Strategy) (MEDS), nokukhulisa isiseko sezakhono zephondo.
I-MEDS sesinye sezicwangciso eziluthotho eziphambili kwizicwangciso zophuhliso loqoqosho zikarhulumente – iKapa eliHlumayo – ukukhula nokwabelana ngeKapa. Isicwangciso sethu se-iKapa eliHlumayo sizinzile ngokukuko ngoku nje, kwaye njengoko sikhula sisabelana ngeKapa ekufezekiseni umbono wethu weKhaya lethu Sonke.
NgengeSebe leMfundo, sikhokela isiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy (HCDS), sijolise kulutsha. Isicwangciso sethu sophuhliso lwezakhono esamiselwa kulo nyaka kwasekuqaleni, sililitye lembombo leKapa eliHlumayo kwaye siya kukhokela izicwangciso zemfundo eNtshona Koloni iminyaka emininzi ezayo. Ukuqulunqwa kwaso kwakukhokelwe nguNtsumpa okhutheleyo weSebe leMfundo, uMnu Ron Swartz. Sisebenze kakuhle sisonke njengeqela elisebenzisanayo.
Umbono wethu kwesi sicwangciso kukubonelela ulutsha lwethu ngezakhono ezifanelekileyo, ngolwazi, ngeemfundiso ezisisiseko nangeendlela ezithile zokucinga, ezinokubenza ukuba bathathe inxaxheba enentsingiselo kuqoqosho lwelizwe baze babe nomoya wokukhuphisana kwilizwe jikelele.
Ngesi sicwangciso, sifuna ukwandisa uthatho-nxaxheba nempumelelo yolutsha lwethu, ingakumbi olo luvela kumakhaya ahlwempuzekileyo, olukwiikholeji ze-FET nolukumaziko emfundo aphakamileyo.
ISebe leMfundo leNtshona Koloni likholelwa ekubeni ukuphuhliswa kwezakhono zoluntu nentlalo yoluntu zizinto ezingenakuyekwa nje, kungabikho ndima idlalwayo. URhulumente makangenelele ngokuthe ngqo ukuze aqinisekise ukuphuhliswa kwezakhono zoluntu nentlalo ingakumbi kuluntu lwethu oluhlwempuzekileyo.
I-HCDS iquka izicwangciso zenguqu ngokwenkqubo ecwangcisiweyo, kwanezicwangciso kuzo zonke izigaba zemfundo. Isicwangciso sibhekiselele ekwenzeni iinguqu kwezemfundo, ngokuqinisekisa ufikelelo, ulungiso nolingano kwanokuqinisekisa imfundo esemgangathweni kuye wonke ubani.
I-HDCS imisele imiba eziithagethi kuzo zonke izigaba zemfundo. Oku kumiselwa kungundoqo kwezi thagethi kubalulekile kwaye kuyinxalenye yendlela yethu entsha yokuqinisekisa ukukhula. Ezi thagethi ziquka oku kulandelayo:
Ukuqinisekisa ukuba bonke abantwana abaminyaka mi-5 eNtshona Koloni bayafikelela ngokupheleleyo kwiiprogram zokufunda zomgangatho ophezulu. Ngo-2005, abantwana abayi-50 000 bangena kwiBakala R. ISebe leMfundo leNtshona Koloni linezicwangciso zokulungiselela ama-80 000 abafundi beBakala R ngo-2014
Umfundi ngamnye kwiMfundo noQeqesho Jikelele (General Education and Training (GET), ejongana neBakala R ukuya kwiBakala 9, makabe nako ukufunda, ukubhala nokubala kumanqanaba ayimfuneko kwikharityhulam kazwelonke. I-GET mayibonelele ngesiseko esiluqilima kuko kunke ukufunda kwixesha elizayo.
Inkqubo yemfundo mayandise inani labafundi, ingakumbi abafundi abantsundu, abathatha inxaxheba kwizikolo zeFET neekholeji. I-FET iya kubonelela ngamathuba kubafundi ukuba bakhethe izifundo ezithile ngokweemfuno zabo, iziphiwo zawo neemfuno zoqoqosho.
ISebe leMfundo leNtshona Koloni linezicwangciso zokwandisa inani labafundi abafumene ukwamkelwa kwiimfundo ephakamileyo (endorsement to enter higher education) ukususela ku-10,394 ku-2005 ukuya ku-20 000 ngo-2014.
Esi sicwangciso sijolise ekwandiseni inani labafundi kwimfundo yabadala noqeqesho (adult basic education and training) (ABET), ukukhuthaza uphuhliso lwezakhono namathuba okugqibezela imfundo yesikolo enemimiselo kubafundi be-ABET abayi-76,000 ngo-2014.
SIYAQHUBEKA NOKUZISA INQUQU ENTSHONA KOLONI
Ndifuna ukuphinda into ebendiyithethile kwiNtetho yam yeBhajethi yangaphambili iminyaka emibini edlulileyo, nendayiphindileyo kunyaka ophelileyo. Ndithe "Siza kuyitshintsha leNtshona Koloni" – "We are going to change the Western Cape- Ons gaan die Wes-Kaap verander.". Ngeli thuba ndifuna ukongeza isijekulo esitsha:
"EACH ONE TEACH ONE: TOGETHER BUILDING A LEARNING HOME FOR ALL." "ELKEEN LEER IEMAND - SAAM BOU ONS 'N LEERTUISTE VIR ALMAL." "OMNYE UFUNDISA OMNYE - SAKHA KUNYE IKHAYA LOKUFUNDA LOMNTU WONKE"
Imingeni esijongene nayo ekufuneni ukuguqula iinkalo ngeenkalo kwezemfundo ukususela kwizinto ezisisiseko, ezifana nokubonelela ngamagumbi eeklasi, ukuya kwimisebenzi entsonkothileyo yokuqinisekisa ukuba abafundi bethu bafikelela kwiziphumo ezifunwa yikharityhulam kazwelonke.
Seso sizathu ke esindenza ukuba ndicele isebe ukuba lijolise kwimiba emithandathu eyiyeyona ibalulekileyo njengoko siqalisayo ukuphumeza IsiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy) ukuze sikhawulelane neemingeni echongwe nguMongameli wethu okanye iNkulumbuso, ingakumbi kwinkalo yokuphuhliswa kwezakhono.
Imiba ephambili engundoqo ayizokusetyenziswa kuphela kuNyaka weBhajethi ka-2006/7, koko ifanele ukusetyenziswa kulo lonke ithuba eliseleyo lokuba sesikhundleni kwam. Le miba yile:
Ulwazi lokuFunda nokuBhala noLwazi lokuBala
Imfundo noQeqesho oluQhubekayo ezikolweni nakwiikholeji zeFET
Ukulungiselelwa kwamaseko, izakhiwo, oomatshini nezixhobo zokusebenza.
Ukuhlenga-hlengiswa kweSebe leMfundo leNtshona Koloni
Izakhono zentlalo kwezeMfundo
Ulwazi lokuFunda nolokuBhala noLwazi lokuBala
Ukuba kunokwenzeka, owona msebenzi untsonkothileyo nonzima esijongene nawo njengokuba sifuna ukubonelela ngemfundo esemgangathweni kuthi sonke, kukuqinisekisa ukuba bonke abafundi bethu bafikelela kwiziphumo ezifunwa yikharityhulam kazwelonke, ingakumbi kwizikolo zethu ezihluphekileyo. Kufuneka siqale ekuqaleni nokufunda, nokubhala nokubala kwisiGaba seSiseko nesiPhakathi ukususela kwiBakala R ukuya ku-6.
ISebe leMfundo leNtshona Koloni belisenza uphando ngentsebenzo yabafundi kulwazi lokubala nolwazi lokufunda nokubhala kumaBakala 3 no-6 kule minyaka imbalwa idlulileyo. Umzekelo, uphando lwethu lwabafundi beBakala 3 ku-2004 lwafumanisa ukuba ngabafundi abayi-39.5% abapasa uvavanyo lolwazi lokufunda nokubhala kwinqanaba leBakala 3, xa kuthelekiswa ne-35.3% ku-2002. Umyinge we-37.3% walupasa uvavanyo lolwazi lokubala, xa kuthelekiswa ne-36.6% ku-2002.
Ngeli lixa sibona iimpawu zenkqubela, sisenendlela ende ekufuneka siyihambile phambi kokuba abafundi bethu abakwizikolo zethu ezihlwempuzekileyo bafikelele kolu hlobo lweziphumo esizifunayo. Uphando lwethu lubonakalise ukuba akukho sisombululo sikhawulezayo, kwanokuba kufuneka sijongane nothotho lwemiba ebanzi ukuguqula imeko.
Ithagethi yethu ngeli thuba kukuqinisekisa ukuba abafundi bethu bapasa ngezinga eliyi-50% kulwazi lokufunda nolwazi lokubhala. Sicela izikolo ukuba zimisele iithagethi ezinokufikelelwa, kwanokuba ziqulunqe izicwangciso zokuba ziya kufikelela njani kuzo. Sizibhala phantsi ezi thagethi zizodwa size sibeke iliso kwinkqubela yazo. Ndiyakholwa ukuba masizilungelelanise iithagethi zethu ukuya kufika ku-50%.
Amava ethu asifundise ukuba kufuneka sisebenze nezikolo ekumiseleni iithagethi ukuqinisekisa ukuba izikolo ziba ngabanikazi bazo. Siya kubhiyozela inkqubela yezikolo zethu ukuze sizikhuthaze ukuba zinyuse izinga lempumelelo kunyaka olandelayo.
Ngokuyimfuneko, sifuna ukuqinisekisa ukuba inkxaso ebekwe esikalini nengamandla ukulungiselela ukuphucuka kolwazi lokufunda nokubhala kunye nolwazi lokubala kwiMfundo noQeqesho Jikelele (GET), ejongene namaBakala R ukuya ku-9.
Kubalulekile ke ngoko ukuba uPhuhliso lweMfundo yaBasaqalayo (Early Childhood Development) kwakunye nolwazi lokufunda nokubhala lwabazali noluntu ngaxeshanye, ziyimiba eyintsika kumanyathelo okuya empumelelweni. Kufuneka sikhuthaze ukuthatha inxaxheba koluntu okungamandla ukuqinisekisa ukuba bonke abantwana bethu banako ukufunda, ukubhala nokubala kulo manqanaba afunwa yikharityhulam. Nkulumbuso, ukhuthaze ukuhlanganiswa okungenamida komsebenzi ngamasebe ethu kwaye sikuthatha oku njengenkuthazo engqongqo. Umnqweno wethu osacetywayo wolwazi lokufunda nokubhala kusapho uzinze ngokupheleleyo kwimodeli ebanzi phakathi kwamacandelo kunye ne"Kapa lokuFunda".
Sinyule iGqiza loPhando phantsi kwenkokheli elichule eliSekela Mlawuli-Jikelele uBrian Schreuder kunyaka ophelileyo ukomoleza nokuqhuba izicwangciso zesebe zokuphucula intsebenzo yabafundi kulwazi lokubala nolwazi lokufunda nokubhala (numeracy and literacy).
Izicwangciso zethu ukuza kuthi ga ngoku zijolise kuqeqesho lootitshala, ukuphuhliswa kwezibonelelo ezixhasa ukufunda nokubhala, amanyathelo awodwa ongenelelo ngoncedo, neemvavanyo zokuphonononga iingxaki. Ngeli lixa izicwangciso ezisisiseko zethu sele zisebenza, izifundo zethu zophando zibonakalise ukuba kufanele ukuba sifikelele kuhlanganiso, ubeko-sweni novavanyo oluqhubekayo.
Siya kusisekela isicwangciso phezu kwesiseko esiluqilima sethu sethiyori yezemfundo (educational theory), kwaye siya kwamkela inkqubo ehlanganiswe ngendlela nequka konke ekuqubisaneni nothotho olubanzi lwemiba, ukususela ekukhuleni komntwana ukuya kwizibonelelo ezincedisa ukufunda nokufundisa, kwanolwimi lokufundisa.
Esi sicwangciso siya kuba lilitye lembombo kwizicwangciso zethu ukwakha izakhono zoluntu, kwakunye nempendulo yethu kwisibhengezo sikaMongameli sokukhula, inkqubela-phambili nokuphuhliswa kwezakhono. Esi sicwangciso siya kumiselwa ngokusesikweni ngoJulayi, kodwa sele siqalisile ngokuphumeza imiba engundoqo.
Umzekelo: ngo-Apreli kulo nyaka siqeshe aBancedisi booTitshala abayi-510 ukuxhasa ootitshala besiGaba seSiseko kwizikolo ezihlwempuzekileyo kwiphondo ngokubanzi; apho kukho khona imfuneko engamandla yolu hlobo lwenkxaso.
ABancedisi booTitshala banceda ootitshala ekuphuculeni izakhono zabafundi zolwazi lokubala nolwazi lokufunda nolwazi lokubhala kwisiGaba seSiseko ezikolweni, bejongene namaBakala 1 ukuya ku-3. Oku kuyimpendulo ethe ngqo kwiziphumo zezifundo zethu zophando ngentsebenzo yomfundi kumaBakala 3 no-6 nekwabonakalisa ukuba abafundi bayasokola ukuhlangabezana neemfuneko zekharityhulam kazwelonke, ingakumbi kuluntu oluhlwempuzekileyo.
Imisebenzi yabancedisi bootitshala iquka ukumamela abafundi befunda, besebenza kunye namaqela kwanabanye abafundi ukuphucula izakhono zokusebenzisa amagama, ukuphucula izakhono zengqiqo yamanani, nokunceda ootitshala ngokumisa iklasi ngendlela kwanokuyilawula.
Le yiprojekthi elingwayo ebandakanye izikolo eziyi-163, ebe nesiqalo esihle. Abancedisi bootitshala basebenza kakuhle nootitshala ababaxhasayo, kwaye bazimisele ukudala umahluko ekufundeni, ekubhaleni nakwizakhono zemathematika kubafundi abajongene nabo. Ukuba uvavanyo lwale projekthi lubonakalisa ubukho begalelo elihle, ngoko ke isebe liya kuthathela ingqalelo ukwandisa olu hlobo lwenkxaso. Kule meko siya kuba sifuna ukwandisa amanyathelo azizinyanzelo abancedisi bootitshala ukuze phakathi kwemisebenzi yabo abayenzayo, basebenze neentsapho eziyi-30 abazindwendwelayo kweli linge lolwazi lokufunda nokubhala "family literacy") phantsi kwentetho ethi "Omnye ufundisa omnye" : "sisonke sakha isicwangciso sekhaya lokufunda kumntu wonke."
Iziphumo zabafundi bethu be-Adult Basic Education and Training nazo zisinika ithemba. Amaziko angamashumi alithoba anethoba (99) nabafundi abayi-1,855 babhalisa kwiimvavanyo zika-Oktobha 2005. Oku kubangela ukwanda kwe-11,2 % kwinani lamaziko athatha inxaxheba kwakunye nokwanda okuyi-9.9% kwinani labaviwa ababhalisayo xa kuthelekiswa no-Oktobha 2004.
Inani labaviwa (56) abafumene iikhredithi ezaneleyo kolu viwo lulodwa ukuze balungele iSatifikethi seGET, belingaphezu kwenani eliphindiweyo lika-Oktobha 2004 (abaviwa abayi-24). Ubungqina bubonakalisa inani labantu abadala ababhalisileyo elinyukayo kwiiprogram ezahlukileyo ezifundiswa ngamaziko e-ABET.
Ezi program zenza ukuba abantu abadala abaninzi baqhubeke nemfundo yabo eyaphazamisekayo. I-ABET iyinxalenye ebalulekileyo yesiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy) sethu.
Malunga nalo mba, ndifuna ukukhahlela umfundi wethu ongoyena mdala uNkskz Anna Ernest weziko eliyi-Worcester Community Learning Centre eliziko eliyisathalayithi leTouws River. Ebengakwazi ukufunda nokubhala ubomi bakhe bonke- kwada kwaba ngulo nyaka, wagqiba ukuba abhalisele ikhosi eyi-ABET level 1.
Malungu ahloniphekileyo, uNksk Ernest uneminyaka eyi-97. Simmemile ke, ulapha kule Ndlu, kwaye ndingathanda ukuba aphakame, ukuze thina sonke simbone ukuba ukho ngenene.
[UMphathiswa uyanqumama kwintetho esesikweni enze elombulelo]
Uyinkuthazo ngokwenene kuthi xa sisonke nakuluntu luphela. Ukwasisiqhamo sokuzinikezela nokuzimisela kwamagosa ethu ee-EMDC kwingingqi yeBoland/Overberg nesandula kumisela umkhankaso ozinzileyo wongenelelo ngoncedo weentsuku eziyi-160 kwiprogram ye-ABET ukwandisa ufikelelo ku-ABET kwisithili sabo.
Inxalenye yokujolisa kuka-ABET kuquka ukuphononongwa kwakhona kwamalungiselelo ka-ABET kujoliswe kumba wokubakho kwamaziko asisigxina.
Ii-FET ezikolweni nakwiikholeji
Ukuxhotyiswa kwakhona kweekholeji zeFET kuya kuba ngumba esiya kujolisa kuwo kakhulu kunyaka-mali 2006/07. Sibekele bucala ama-R25 ezigidi ukwandisa isikim semboleko kubafundi beekholeji zeFET, nento eya kwenza ukuba kwandiswe inani labafundi ababhalisileyo ngokumandla, ingakumbi abo bafundi bavela kuluntu oluhlwempuzekileyo.
Iikholeji zethu zeFET zikwanika inkxaso iiprogram zoQeqeshelo-msebenzi (Learnership programme) kuqeqesho lwabasele bephangela nelawulwa kuzwelonke liSebe lezaBasebenzi. Imizekelo iquka inkxaso yethu kwiphulo loqeqeshelo-msebenzi lweMEC oluyi-Fransman’s Learnership 1000 Initiative. Siya kuqhubekeka siphuhlisa iikharithyulam zecandelo leekholeji noqeqesho lwekharityhulam kootitshala ngokubanzi. Le nkxaso idlala indima ebalulekileyo ekusenzeni ukuba sikhawulelane neethagethi zokukhula koqoqosho.
Sijolise ekuphuhliseni izakhono eziyimfuneko ukukhawulelana neenjongo zeMEDS, ngokwandisa inani leekholeji zeFET, ngeli lixa kukhuthazwa abafundi ukuba bangena kwiMfundo yamaZiko aPhakamileyo, ingakumbi abo banezicwangciso zokufunda imathematika, isayensi nethekhinoloji.
Uphuhliso olubaluleke gqitha ekuphuculeni izakhono kwiikholeji zethu zeFET, kukuqeshwa okuza kwenziwa kwamaGosa angamaSekela eeNtloko eQoqo eLilawulayo (Deputy Chief Executive Officers) kuzo zonke iikholeji zeFET. Oku ndikuthatha njengokubalulekileyo kwisiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy) kwaye oku ndiya kukunika ingqwalasela ekhawulezileyo ngokwam buqu.
Kwangeli lixa, ndibamba ngazo zozibini kwizikolo zethu ngamalungiselelo achanekileyo nangolawulo lweSebe leMfundo leNtshona Koloni. Siye sayimisela ngempumelelo inkcazelo yekharityhulam kazwelonke kumaBakala 10 ukuya ku-12, kuqalwa ngeBakala 10 ku-2006. Amalungiselelo ethu okuqalisa ikharityhulam kwiBakala 11 ku-2007, aqhuba kakuhle.
Simisele neprogram yethu yokumisela izikolo ekugxilwe kuzo eziyi-28 eNtshona Koloni, sijolise kwizifundo ze-Arts & Culture; Business, Commerce and Management; ne-Engineering and Technology. Le program iya kunikainkxaso ekuqalisweni kwekharityhulam yeFET kazwelonke ezikolweni kwaye iya kuphucula ufikelelo kwimfundo esemgangathweni kwizifundo ebezikade zingafumaneki kubafundi kwiingingqi ezihlwempuzekileyo.
Izikolo ekugxilwe kuzo zisasazwe kuzo zonke izithili zemfundo kwiphondo. Ziya kukhawulelana neemfuneko zethu kwaye ziya kuxhobisa abafundi ngezakhono ezinqongopheleyo ezifunekayo kwiindawo zokusebenza. Iprogram yezikolo ekugxilwe kuzo ihlangabezana nothatho-nxaxheba lwethu kwizikolo zeDinaledi zeMathematika neSayensi. Kulo nyaka, sandise inani lezikolo ezithatha inxaxheba kule nkqubo ukususela ku-10 ukuya ku-50.
Sithathele kuthi umgaqo wokugxila kwizikolo ezithile ukongeza kuphuhliso lwesikolo siphela kwisikolo ngasinye ukuze senze umahluko kwimfundo kwiphondo. Onke amaziko okugqibelela aya kudlala indima ekuqondeni iziphiwo zabantu abatsha ngabodwa kwezi zikolo, nto ke leyo eyinzuzo yona ngokwayo. Sijonge ukwakha uninzi lwezinto ngezinto zokugqibelela neziya kwenza iinguqu kuluntu lwethu ngokubanzi. Ngoko ke mandiyigxininise into yokuba izikolo ekugxilwe kuzo ziyinxalenye yesicwangciso esikhulu sokulungisa iimeko zangaphambili kwaye mazingabonwa njengomsebenzi onezicwangciso zokudala iindawo ezikhethekileyo zabathile ezingafikelelekiyo kwabanye (islands of elitism).
Ndiza kuthatha nje inkalo ibe nye ekugxilwe kuyo ukubonisa ukuba singenza njani ukutshintsha imbono ibe kukwenza: Eli phondo libonelela iimvumi ezisencinane eziphumeleleyo kuyo yonke imibhiyozo kaTirisano, nakulo naluphi na ukhuphiswano. Uxanduva lwam namhlanje kukuba thina senze iNtshona Koloni ibe likhaya lomculo weli lizwe. Isicwangciso sethu sokuphuhlisa umculo masijonge kumaziko omculo wanamhla, ekwandiseni amathuba eemvumi ezisencinane nokugxila kumculo wesintu. Ndiyakholwa ukuba ukuqeshwa kootitshala bomculo abajikelezayo kwinqanaba lesithili kwanokugxila kwizakhono eziyimfuneko zomculo ezinxulumene nengqesho kumaziko aqhagamshelene neekholeji zethu, kuya kuveza izakhono neetalente esinazo ngokugqithisileyo. Sithenge isakhiwo esasisaya kuba sese-CRIC e-Athlone Premier. Ndinqwenela ukwazisa le ndlu ukuba esi sakhiwo, sisendaweni efanelekileyo ngakwinyoba yeKlipfontein kufutshane neJoseph Stone, sele sikhethiwe njengesinye kwiindawo zeli phulo. Iya kuqalela apha ke iNtshona Koloni ukuphuhlisa izakhono eziyimfuneko kushishino lomculo. "Lumka Gauteng…sibheka phambili apha eNtshona Koloni! Die Wes-Kaap is duidelik."
Amalungiselelo amaseko (Infrastructure Provisioning)
Ngeli lixa siseza kuhamba indlela ende phambi kokuba sibe namagumbi okufundela awaneleyo apho afuneka kakhulu khona, senze inkqubela ebonakalayo kulo nyaka udlulileyo, kwaye siya kuqhubela phambili ngalo mba kunyaka-mali omiyo.
Ku-2005/06 iphondo lenza imbali ngokugqiba izikolo eziyi-15 kunyaka omnye kwaye sahamba namaxesha okuba zivulwe kunyaka wesikolo ka-2006. Siya kugqiba izikolo ezisithoba ezizezinye ngoJuni kulo nyaka, kwakunye namagumbi okufundela awongezelweleyo ayi-60.
Eli phondo liya kwakha izikolo ezizezinye eziyi-11 kunyaka-mali ka-2006/07, ukuze inali elipheleleyo lezikolo ezakhiweyo kunyaka-mali ka-2005/06 no-2006/o7 liye kufikelela ku-35.
Sibulela iSebe lezoThutho neMisebenzi kaRhulumente ngazo zonke iinzame zalo zokwenza ukuba oku kube yimpumelelo, kwaye sijonge ekubeni sisebenze nabazali bethu kweli sebe ukugqiba le program yokwakha. Imisebenzi eyongezelelweyo ku-2006/07 iya kuba kukugqitywa kokuphunyezwa kwe-Project Management Unit kwiSebe leMfundo leNtshona Koloni ukuncedisa ekulawuleni iiprojekthi zokwakha ngokungaphezulu nangokusebenzayo.
Kukwakho nenkqubo yokwaba izimali ngokuthe ngqo kumabhunga olawulo ezikolo ukulungiselela ukuphuhliswa kwamaseko. Le nkqubo iya kususa imiqathango nemimiselo ebandakanyekayo kulwakhiwo longxamiseko neeprogram zolondolozo kangangoko kunokwenzeka.
Ngoku sigqibezela izicwangciso zamalungiselelo kuzo zonke iisekethe ukuze sikwazi ukuqulunqa uluhlu olutsha lwephondo lwemiba ephambili ukulungiselela ukwakha izikolo, iiholo zezikolo nezinye izinto ezingamaseko eziyimfuneko. Sijonge ekusebenzisaneni namahlakani ethu kwamanye amasebe njengoko siphumeza ezi zicwangciso. Kweli thuba lizayo izigqibo eziqatha kufuneka zithatyathiwe.
Ngokubhekiselele ekwandisweni kwamaseko (infrastructure), sinezinto ezintathu esingazikhethayo. Ukuthengiswa komhlaba wesikolo ongokarhulumente ongasetyenziswayo phantsi kohlenga-hlengiso lwebhajethi kwakunye neminye imiba ephantsi kobuhlakani kumacandelo karhulumente nawabucala. Ngokucacileyo siya kusebenzela ukuya kufikelela kuzo zontathu ezi zinto.
Namhlanje makhe sithi nqumama, sikhumbule amaxhoba ka-2005 engozi yebhasi, sikhumbule uDane Darries omncinane noCheslyn Jones abasweleka kuhlaselo lobundlobongela. Siva kabuhlungu ngazo zonke izenzo zokubethwa, ezokuhlaselwa, nezonxunguphalo olugqithisileyo ezehlela ulutsha lwethu.
Kwangaxeshanye, sincoma amaqhawe awanceda kwezi zenzo zonxunguphalo- abo bathuthuzelayo, baza banika iingcebiso, benika ithemba kumaxhoba. Ngokukodwa, Nkulumbuso, ndifuna ukukhetha uKevin Arendse, umfundi ominyaka ilishumi eMonte Video Primary, owaqweqwediswayo waza ngelo thuba wabonisa ubukhalipha nobulumko obungummangaliso. Ndiya kumtyumba uKevin ngokufanelekileyo kwitheko lamawonga akhethekileyo eNkulumbuso, kulo nyaka. Ootitshala bethu bangamaqhawe ethu nabo, njengoko besima bachase ungenelelo nokonakaliswa kwepropathi yesikolo baze bakwazi ukumelana nonxunguphalo, nokophuka kwentliziyo nobundlobongela, izinto ezo ezithande ukuba yinxalenye yemeko yoluntu lwethu. Ndinithulela umnqwazi xa ninonke.
Iprogram yeZikolo eziKhuselekileyo yeSebe leMfundo leNtshona Koloni (Safe Schools programme) iye yakhula yaya kufikelela kwiqondo lokuba izikolo zethu zibe yindawo yokhusekelo ngokubanzi phantsi kweemeko ezizezona zinzima. Le program iquka ukusebenza ngokusondeleyo nabazali kumacandelo abanzi awahlukileyo, awoluntu, awemibutho ukuya kumasebe nahamba kunye nawo kunye nawamapolisa.
Ubuhlakani bethu neSebe loKhuseleko loLuntu (Community Safety) bungumzekelo ogqibeleleyo. ISebe loKhuseleko loLuntu lifumene inkxaso-mali – eyi-R6 yezigidi kulo nyaka-mali ukuze kuthunyelwe amavolontiya amathandathu okhuseleko lwesikolo saseBambanani kwizikolo ezili-100 – omnye kuwo kwisikolo ngasinye ngumzali.
ISebe loKhuseleko loLuntu ngokusebenzisana nephulo leZikolo eziKhuselekileyo, lasungula ukuqeshwa kwamaGosa oKhuseleko, okanye ii-LSO, asekelwe kwizikolo nee-EMDC. ISebe leMfundo leNtshona Koloni liyithathele kuyo le program kwaze ukufakwa kwamagosa amatsha e-LSO kwenza igalelo elisebenzayo ekwakheni izikolo zibe ziindawo ezikhuselekileyo, ukuze zikwazi ukuqubisana nomba wokungahanjwa kwesikolo ngokungekho semthethweni.
Abantwana bethu mababe sesikolweni ukuze bazixhobise ngolwazi, izakhono neemfundiso ezisisiseko ukuze babe ngabemi abanako ukunceda ukwakha uluntu lwabo, ingekuko ukulutshabalalisa. Kule meko sijonge iziphumo zokuphononongwa okusemthethweni kwephulo leZikolo eziKhuselekileyo kulo nyaka.
Ngokusebenzisana namasebe ahamba kunye nathi, siya kuqhubeka siqulunqa iinkqubo ezihlanganisiweyo nezicwangciso phakathi kweendibanisela zasekuhlaleni, sijonge kubudlelane bentsebenziswano phakathi kwezikolo noluntu lwazo.
Isikolo siyinxalenye yoluntu, indima yaso kuluntu kukufikelela nokukhonza uluntu, kuvulwe iingcango kumntu wonke kwanokwenza ukuba uluntu xa lulonke lube luluntu oluthanda ukufunda. Abafundi, ootitshala nabasebenzi abakulawulo abazo arhente zezikolo kuphela, koko bakwazii-arhente zoluntu, ii-arhente zenguqu kwintlalo yoluntu nophuhliso.
Kukho unxibelelwano lwentsebenziswano phakathi kwezikolo ezikhuselekileyo noluntu olukhuselekileyo. Uluntu oluthatha inxaxheba noluneemvakalelo ngobunikazi noluzingcayo ngesikolo salo, alusonakalisi isikolo kwaye alubavumeli nabanye ukuba benze njalo. Sijonge kwizikolo ezi ngumzekelo ukuba zikhokele kwimisebenzi eyenziwa kwakugqitywa eyesikolo kwanamandla azo okubumba ubomi babo balulutsha.
Ekupheleni kwalo nyaka, siya kuba nomcimbi obizwa ngokuba yi-WCED Community School Week – Iveki yeSikolo yoLuntu lweWCED, neya kuba lilinge lamacandelo adibeneyo nelibandakanya bonke abaPhathiswa kwiNdibanisela yezeNtlalo, kwakunye neqela lesicwangciso esihlanganisiweyo esikhoyo ngoku. Eli phulo lijolise ekubuyiseleni ithemba nentlonipho kuluntu lwesikolo. Sibekele bucala inxalenye yebhajethi ukulungiselela lona kwaye sithemba ukuba amanye amasebe aya kwenza ngolo hlobo ukunika inkxaso kweli linge.
Kwinkqubo "yoluntu oluyinxalenye yemfundo" ("learning community") wonke ubani eluntwini ufuna kwaye enqwenela ukufunda, yaye wonke ubani enako ukufunda komnye. Kungoko kubalulekile ukunxibelelanisa eli linge noMnyhadala weKapa eliFundayo (Learning Cape Festival).
Amagama aphambili yintatho-nxaxheba (participation), intsebenziswano (collaboration), ukufunda (learning), inkqubo (process), ubunikazi (ownership), umanyano (integration), ukuchasa ucalucalulo (non-discrimination), uvuyo (joy). Sifuna kwenziwe amalinge abalulekileyo kulutsha njengabadlali-ndima abaphambili (main actors), hayi ukuba babe yinxalenye yengxaki koko babe yinxalenye yesisombululo.
Ulutsha ngabadlali-ndima esikolweni naseluntwini (school and community actors), olunendima ebalulekileyo yokudibanisa (bridging role) kuyo yonke imisebenzi nakumanqanaba obudlelane kuluntu oluyinxalenye yesikolo/kubudlelane kunye nesikolo, luzise umoya wokudlala, uburharha (humour), umculo, kunye novuyo kuluntu.
UPhuhliso lweNtsebenziswano kwezeNtlalo (Social Capital Development)
Ndinqwenela ukuthatha ithuba elidana ndithetha ngegalelo leSebe leMfundo leNtshona Koloni kuPhuhliso lweNtsebenziswano kwezeNtlalo (Social Capital Development). INkulumbuso yaye yathi kwiNtetho yokuVula iNdlu yoWiso-mthetho kwiPhondo (State of the Province Address): "Umngxilo wesine wesicwangciso sokulwa indlala mawube luluntu olukhuselekileyo, oluphilileyo nolubumbeneyo. "Uluntu oluluqilima olusekelwe kwiintsapho eziphilileyo nezinothando sisiseko sendyebo…" ("The fourth element of the battle plan against poverty must be safe, healthy and integrated communities. Strong communities based on vibrant and loving families is the cornerstone of prosperity …").
Umngxilo wesihlanu kwisicwangciso sedabi "mawube kukulungiselelwa kwempilo yezentlalo eluqilima". "Abantu nje ngokuqhelekileyo ngabona badlali-ndima baphambili ekufezekiseni impumelelo eya ikhula kwithuba lexesha elide. Okunika ingqiniseko loo mpumelelo kumaxa umndilili wabantu uqokelelwe waze waqhagamshelaniswa nazo zonke iziseko zoluntu ngelokukhusela nokukhonza uluntu". ("Ordinary people are the most important actors in achieving developmental success over the long term. What guarantees such success is when ordinary people are organised and networked into and across community structures both to protect and serve communities".)
Isayikholojisti yezentlalo, uLionel Tiger, uthi ithemba "sisakha-mzimba esiyimfuneko kwiinkqubo zokutshintsha imeko yezentlalo" ("essential vitamin for social processes") / ("onmisbare vitamiene vir sosiale prosesse".) Ukuba bonke abantu bebenokuvuka ngemini nganye babhengeze ukuba ‘Akukho nto inika ithemba’, ngoko nangoko bekungekhe kwabakho (uqhuba atsho) ngomso lililo kwaye bekunokungabikho malungiselelo qho kwezentlalo (continuous social arrangements). Ifilosofa ngezokuzimela-geqe komntu (existentialist philosopher), uGabriel Marcel, uyangqina ukuba ithemba "libakho kuphela kwinqanaba lokuba sisithi... kwaye lingekho inqanaba lokuphila komntu ngokuzimeleyo" (solitary ego).
Kodwa owona mngeni umandla kuthi kukuchaza nokukhulisa ezo mbewu zethemba. Kwaye ukuze thina sibe nokuqaphela inxaxheba yethemba ekuyileni izinto ngokutsha. Ithemba likhuthaza uphuhliso lwezisombululo eziqiqiweyo (imaginative solutions) kwiingxaki ezikhangeleka ziinzima kakhulu. Enyanisweni, uDavid Halpin uxoxa athi "ngaphandle kokuba ithemba liye lavuselelwa kwaye liphilile, akunakubakho zicwangciso zizizo / teensy hoop gewek is en lewend is, kan daar geen beplanning wees nie.. ("Unless hope has been aroused and is alive, there can be no planning"/ "tensy hoop gewek is en lewend is, kan daar geen beplanning wees nie.")
Ingcali yembali kwezenkcubeko (cultural historian), uRaymond Williams, ocatshulwa nguDavid Halpin, uthi kwenzeka kuphela kwimeko yolwabelwano nakugxininiso ukuba makubekho ezinye iindlela eziphathekayo ekuye kuthi ngazo kulungelelaniswe izinto aze namathuba aqalise ukutshintsha. Nje ukuba kucelwe umngeni, uqhuba athi, siye siqalise ukuqokelela izinto ezizizibonelelo zethu zokunceda kuhambo lwethemba (journey of hope / reis met hoop).
Okokuqala kulo nyaka siye sashicilela i-WCED "Plan of Action" neseyiqukiwe kumqulu wakho, kwaye, kwimeko yamalungu asebenzisa inkqubo eyi-memory stick eyaye yanikezwa ukunceda wena nguOracle. I-Plan of Action isekwinqanaba loyilo (draft) kuba isamana ukulungelelaniswa yaye inokuziphinda-phinda. Nakuba kunjalo, imele ingcaciso yazo zonke izinto zethu ezibalulekileyo, ibonisa imo yezinto eziza kuqala kum ngokobaluleko kwaye izama ukuqinisekisa ukuba zonke iinzame zethu zingqamaniswe ngokucoselelekileyo (seamlessly aligned) kwaye zijolise ekusebenzeni ngokumandla. Iyinxalenye "yohambo lwethu lwethemba" ("journey of hope".)
Izinto ezibalulekileyo zophuhliso lwentsebenziswano kwezentlalo (social capital priorities) ezidweliswe kwi-POA zezi:
RCL Association and RCLs
Youth and Heritage Celebrations
Strengthening School Sport
"Adopt a School" Project with Chamber of Commerce ABET feasibility
ABET feasibility studies
Pilot projects regarding past pupils associations
Teacher supply and development
Ndingathanda ukukhankanya imizekelo emibini yemisebenzi esiyenzayo ukwakha intsebenziswano yezentlalo kwezemfundo (social capital in education). Owokuqala uquka i-Association of Representative Council of Learners ukuba ibe ngumlomo wabethu ncakasana abenzelwa inkonzo yezemfundo, oko kukuthi abafundi bethu eklasini.
I-Association of Representative Council of Learners iya kubonelela ngeforam apho iinkokeli zabafundi zinokubamba ingxoxo-mpikiswano ngezinokukwenza ukuqinisekisa umoya wokufunda nokufundisa ngempumelelo ezikolweni zabo. Ikamva ekugqibeleni lelabafundi bethu. Mabakwazi ukulilawula ikamva labo, kwaye eyona ndlela ingcono abanokuyilandela kukufumana imfundo eyiyo nesemgangathweni.
Ii-RCL zethu zinokudlala indima ebalulekileyo ezikolweni zethu ukujongana nemiba enjengamalungelo kunye neemfanelo zabafundi, amalungelo oluntu, iyantlukwano, usetyenziso gwenxa lweziyobisi, ubugewu (gangsterism) kunye ne-HIV ne-AIDS, ukukhankanya nje ezimbalwa.
Siye saququzelela inkomfa ye-RCL eyaba yimpumelelo kakhulu kunyaka ophelileyo. Kwinkomfa leyo saye sonyula ikomiti yethutyana ukuqwalasela umbutho wephondo kunye nomgaqo-siseko. Ngomhla we-15 Juni kulo nyaka siya kuqalisa umgaqo-siseko kunye nombutho, njengenxalenye yokunika imbeko kwisikhumbuzo sonyaka wama-30 wesizukulwana sango-1976. Apha kwigalari namhlanje sinosihlalo wekomiti yethutyana, uAlbertus Duba waseCape Town High School – Ndinqwenela ukunika imbeko kuye nakwamanye amalungu e-WCRCL.
Ngoku, siyabakhuthaza kananjalo abadla umhlala-phantsi nabo babesaya kuba ngootitshala ukuba badibane bakhe umbutho, basebenze ngokubambisana norhulumente ekuphuculeni imfundo yabo bonke abafundi bethu. Oku kungqamene nokuzinikela kwethu ekusebenzeni ngokubambisana nabo bonke abafanelekileyo abanebango (relevant stakeholders) abanokunceda ekwakhiweni ngokutsha (reconstruction) nakuphuhliso (development) lwelizwe lethu.
Ndiye ndacela abasebesidla umhlala-phantsi kunye nababesaya kuba ngootitshala abanomdla wokuqalisa loo foram, ukuba bafake iinkcukacha zabo kwi-Ofisi yoMphathiswa wePhondo. Sesinamagama angaphezulu kwama-200 esinawo. Singathanda ukubamba intlanganiso nabo bathathi-nxaxheba kungekudala kwixa elizayo, ngenjongo yokuseka ikomiti yokuququzelela yethutyana (interim steering committee), kuze kulandele kamva uxwebhu olusisikhokelo somsebenzi sethuba elide (long-term operational framework).
Somlomo, Malungu aHloniphekileyo, nisengaba senisazi ukuba phakathi koMeyi noJuni kulo nyaka, zonke izikolo zikarhulumente zilindeleke ukuba zonyule amalungu eBhunga loLawulo leZikolo (School Governing Bodies). Okulandelayo emva konyulo lukazwelonke nolwephondo, kunye noloo rhulumente bakamasipala, le yeyona nkqubo inkulu yedemokrasi eMzantsi Afrika, equka ngaphezulu kwama-25,582 ezikolo, ezinezihlalo eziphantse zibe ngama-200,000 ekufuneka zizaliswe.
Umxholo kazwelonke kunyulo lwalo nyaka uthi: ‘Votela ikamva lomntwana wakho’ (‘Vote for your child’s future’). Ndifuna ukuhlaba ikhwelo kubo bonke abazali, nkqu nakuMalungu ale Ndlu yoWiso-mthetho, ukuba babe nokuzibandakanya njengee-arhente ezakhayo zenguqu. Ii-SGB zinoxanduva lokulawula ngempumelelo izikolo. Kubalulekile ngoko ke ukuba zibe namalungu anezakhono eziyimfuneko zokwenza loo msebenzi.
ISebe leMfundo leNtshona Koloni libandakanyeka ngokubonakalayo kule nkqubo, kwaye lenza umsebenzi othe rhoqo wokuxhobisa ii-SGB. Iinjongo zale program yoqeqesho zinxulunyaniswa nesiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu nezeNtlalo (Human and Social Capital Development Strategy) sikaRhulumente wePhondo leNtshona Koloni. Siceba inkomfa kunye nemibutho ye-SGB eya kuqhubeka phambi kokuphela konyaka ngenjongo yokuseka iforam yothetha-thethwano.
Uhlenga-hlengiso lwe-WCED (WCED Redesign)
Indima yesithandathu ebalulekileyo ku-2006 iya kuba kukuhlenga-hlengisa i-WCED. Ngoku sesiqalile ukusebenza ekuqaliseni isiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy). Isigaba sokuqala sale projekthi siquka ukuphanda ukuba ingaba i-WCED inazo na izakhono zokuphumeza esi sicwangciso.
Siya kuyihlenga-hlengisa i-WCED apho kuyimfuneko khona ukuqinisekisa ukuba sinazo ezi zakhono. Le nkqubo iya kusinika kananjalo ithuba lokujongana nomba wenguqu (transformation) kwi-WCED. Siyibiza le nkqubo ngokuba yi-WCED Redesign Project.
Uhlenga-hlengiso lubalulekile ukuqinisekisa ukuba ubume bezikhundla kwiqumrhu (organizational structure) kunye nendlela yokusebenza (culture) ingqamene nesicwangciso sethu. Ngaxeshanye ithuba liya kusivumela siqinisekise ukuba isebe lethu liyabamela bonke abantu beli phondo.
UMongameli weZwe kunye neNkulumbuso bobabini basazise ngokunika umgqaliselo kwababhinqileyo kulo nyaka kwaye uMongameli weZwe ubhekiselela ngokukodwa kwimfuno "yokunika ingqwalaselo eyimfuneko kwimiba ebalulekileyo yokubandakanywa kwababhinqileyo nabantu abanokhubazeko kumazinga karhulumente okwenza izigqibo".
Ngokuphandle nje akwamkelekanga ukuba isebe lethu libe nababhinqileyo abambalwa bazo zonke iintlanga, ngokukodwa kuBaphathi aBakhulu kunye nokuba abantu abantsundu babe abamelwanga ngokufanelekileyo kwi-WCED. Masisebenzise naliphi na ithuba kulo nyaka ukuqinisekisa ukuba ubulungisa kwezengqesho (employment equity) buyenzeka.
Umbono wethu we-WCED ngoweKhaya lokuFunda Lethu Sonke (Learning Home for All). Isebe lethu kufuneka kananjalo libe likhaya lethu sonke – elabaNtsundu, abeBala, abaMhlophe, amaNdiya, ababhinqileyo, abatsha, abadala kunye nabakhubazekileyo (differently-abled). Siya kuqhubela phambili sizama ukuba bamelwe abantu baseNtshona Koloni.
IZINTO EZIBALULEKILEYO KUMGAQO-NKQUBO
Iprogram yethu yalo nyaka-mali umiyo iquka ukuqulunqa iindidi ngeendidi zemigaqo-nkqubo ukuxhasa ukuqaliswa kwesiCwangciso soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy). Mandidwelise ezinye zazo:
Umthamo wesikolo nolwamkelo lwabafundi (school capacity and admissions)
Ezi zinto ziquka umgaqo-nkqubo woMthamo weSikolo noLwamkelo lwaBafundi (School Capacity and Admissions policy) ukuncedisa ekwamkelweni kwabafundi ezikolweni ngo-2007. Ngoku sihlalutya ingcebiso yezomthetho eye yafunyanwa ngomgaqo-nkqubo wethu ocetyiswayo. ISebe leMfundo likaZwelonke liya kumenywa kananjalo ukuze lithathe inxaxheba kwezi ngxoxo.
Siqulunqa kananjalo uxwebhu olungumgaqo-nkqubo osesikweni, i-WCED Learner Transport Policy. I-Learner Transport Scheme yeyona inkulu efana yodwa kweli lizwe, kwaye inegalelo ngokumandla ekuphuculeni ukufikelela kwimfundo kuluntu lwethu olulolona luhlwempuzekileyo, ngokukodwa kwiindawo ezisemaphandleni.
Esi sikim simele utyalo-mali lonyaka olumalunga ne-R110 lezigidi, kwaye oku kuseyinto edala impikiswano. Sisebenzisa isikhokelo sokubonelela ngokuthuthwa kwabafundi ukusuka kwiindawo zoluntu oluhlwempuzekileyo kumgama ongaphezulu kweekhilomitha ezintlanu ukusuka kwesona sikolo sikufutshane nalapho izithuthi zikawonke-wonke zingafumanekiyo khona.
Ngokwenene, ukubonelela ngezothutho akuyonxalenye yomsebenzi esigunyaziswe ukuba siwenze njengesebe lemfundo. Sifuna umgaqo-nkqubo ocacileyo ongokubonelelwa ngezothutho, kwaye simema uphando nentsebenziswano sidibene neSebe lezoThutho kunye nabanye ukuphanda lo mba. Kukho uluvo olumandla olukhoyo lokuba izithuthi zabafundi mazidityaniswe kwinkqubo yezothutho kazwelonke (national public transport system).
Ngoku, sisaqwalasela izibheno ezichasene nokusetyenziswa kwesikhokelo esimalunga neekhilomitha ezintlanu, kodwa oko kusenzeka kuphela kwiimeko apho ukhuseleko lwabafundi lusemngciphekweni khona.
IziCwangciso zokuBonelela ngezeMfundo (Education Provisioning Plan)
UNdlunkulu kunye nee-EMDC zethu ngoku zithetha-thethana nezikolo kunye neekholeji ngezicwangciso zokubonelela ngezemfundo (provisioning plans) kwisithili nakwisekethe nganye. Imiba leyo iquka indlela yokusebenzisa zonke izinto eziluncedo zethu. Ukusekwa kweeforam kunye neziCwangciso eziLuyilo zeNgqesho (Draft Education Provisioning Plans) kubo bonke oomasipala bodidi B kunye neekomitana zikamasipala (sub-councils) kwinqila yesixeko (metropolitan area) kuya kuba lelona jelo lothetha-thethwano kwizicwangciso zangaphakathi zengqesho zesebe lemfundo (local education education provisioning plans). Ngokumalunga nezemfundo eNtshona oku kuthetha ukuba izicwangciso zangaphakathi zengqesho ezingama-44 mazigqitywe kulo nyaka koomasipala bethu bodidi 24 kunye nakwiikomitana zikamasipala zenqila yesixeko ezingama-20 (metropolitan sub-councils). Ezi zinto mazingqamane nethemplethi emiselweyo (standard template) efikelelekayo nekulula ukuyiqonda. Enyanisweni ezi nto zifanele ukuba yimbonakalo yangaphakathi kwi-HCDS.
Ngokungqamene nokuzinikela kwethu kurhulumente omanyeneyo (seamless government), sisebenza kunye nomasipala ukuqinisekisa ulungelelaniso olumandla phakathi kophuhliso lwendawo kunye nokubonelela ngemfundo. Ngenxa yoku, iprojekthi yethu yohlenga-hlengiso iquka ulungelelwaniso lwemida yethu yezithili zemfundo naleyo yoomasipala.
Ekugqibeleni, masiqinisekise ukuba sisebenzisa izinto eziluncedo nezinqongopheleyo ngempumelelo nakakuhle kangangoko sinako ukuqinisekisa eyona mfundo iyiyo yomfundi ngamnye oseziklasini zethu. Siceba ukuqalisa ezi ndibano zothetha-thethwano ngoJulayi 2006.
IsiCwangciso seNguqu seeLwimi kwezeMfundo (Language-in Education Transformation Plan)
Emva kwethuba elide lothetha-thethwano olunocoselelo kunye nabo bonke abanebango, iSebe leMfundo leNtshona Koloni likulungele ukwazisa iithagethi zesiCwangciso esibanzi seNguqu seeLwimi kwezeMfundo (major Language-in Education Plan).
Ukuqala kulo nyaka, sinenjongo yokuqhuba iprogram emandla yokuqhelaniswa kwamagosa kunye nootitshala ngezomsebenzi (intensive induction programme) ukuqinisekisa ukuba bahlala belungile abantu abanezakhono kunye nolwazi ukuxhasa iithagethi ezimbini phambi kokuba siye kwiprogram ekumgangatho ophezulu yokufikelela abenzelwa inkonzo (high–profile outreach programme) phakathi kwabazali kunye noluntu.
Iithagethi zethu zezi:
Ukukhuthaza izikolo ukuba zandise ukufundisa ngolwimi lwenkobe ukuya kutsho ekupheleni kweBakala 6 njengomlinganiselo omncinane, ngelixa ngaxeshanye kuphuhliswa izakhono zabafundi kwisiNgesi ziyokutsho kwiqondo eliphakamileyo lezakhono. Le yinkqubo eyaziwa njengenkqubo yezemfundo esekelwe kuphuhliso lolwimi lwenkobe kwanezinye iilwimi (mother-tongue-based bilingual education).
Ukukhuthaza izikolo ukuba zifundise ubuncinane iminyaka emithathu ngazo zontathu iilwimi zephondo phambi kokufikelela ekupheleni kwecandelo leGET (GET band): le nkqubo yokwakha isizwe ngokuba nobuchule bokusebenzisa iilwimi ezintathu (trilingual proficiency) ifanele ukufaka igalelo ekuhambeni kwexesha ekukhuleni ngokunyanisekileyo nakwimvisiswano kwezentlalo (social harmony) kweli phondo.
Le iya kuba yinkqubo ende eya kukhatshwa yiprogram yezoqeqesho ebanzi (comprehensive training programme) ukuxhobisa ootitshala ukuze bajongane nomngeni ngezo zakhono ziyimfuneko. Asisayi kuziphumeza ezi njongo ngobusuku obunye. Njengoko iyinkqubo eya kuthi iqaliswe kwisithuba seminyaka eliqela akusayi kubakho kubuya umva xa sesiqalile.
Ubuhlakani phakathi kukarhulumente namaqumrhu abucala (public-private partnerships)
Enye inkalo ephambili yophuhliso lomgaqo-nkqubo iya kuba yileyo iquka ubuhlakani phakathi kukarhulumente namaqumrhu abucala (public-private partnerships). Siye sanika ingqwalaselo ekuphuhliseni iWestern Cape Education Foundation kwisithuba sonyaka, ngentsebenziswano kunye namahlakani ecandelo lamaqumrhu abucala, yaye iya kuqhubela phambili le nkqubo ngo-2006.
Le Foundation yayisekwe ngokudibeneyo yi-WCED kunye namahlakani ecandelo lamaqumrhu abucala ukuphucula umgangatho wemfundo eNtshona Koloni ngentsebenziswano eyiyo phakathi kwamahlakani karhulumente/awamaqumrhu abucala. Ingcamango esinayo kukuseka "indawo ekufumaneka kuyo izinto zonke" ("one stop shop") ukwenzela onke amahlakani kunye nabaxhasi ngemali abanqwenela ukufaka igalelo ekukhuleni kwezemfundo kweli phondo. Sifuna ukuqalisa izinto ukulungiselela ubuhlakani obusifaneleyo (niche partnerships), obamahlakani amancinane (small partnerships) kunye nalawo makhulu ngokomlinganiselo.
Izicwangciso zethu ziquka ukuqesha abaqeshwa abazinikeleyo ukulawula nokuqhuba imicimbi yemihla ngemihla yeFoundation. Imisebenzi yeFoundation iquka unyuso lwengxowa-mali kunye nokuqinisekisa ukuba iinzame zethu yokuxhasa imfundo zinxulunyaniswa ngokuyondeleleneyo neenjongo zethu ezicwangcisiweyo.
Isicwangciso sethu somsebenzi kulo nyaka siquka kananjalo ukusebenzisana namasebe amanye amaphondo kwimiba ngokubanzi eyahluka-hlukeneyo ukuxhasa ulutsha kunye nababhinqileyo, xa sithetha ngezi nkalo zizodwa kulo nyaka.
Imizekelo iquka ingqwalaselo kusetyenziso gwenxa lweziyobisi, ngentsebenziswano neSebe lezoKhuseleko loLuntu (Community Safety), zikhuthaza ezoshishino ngokubambisana neSebe lezoQoqosho noKhenketho (Finance and Tourism), ezemfundo ne-HIV ne-AIDS kwabezeMpilo, phakathi kwamanye.
IZINTO EZIBALULEKILEYO KWISIZWE
Ezinye izinto ezibalulekileyo ku-2006 ziquka ukuqulunqa imigaqo-nkqubo engokufikelela izikolo zikarhulumente, iihambo zesikolo kunye nobhaliso lwezikolo ezizimeleyo. Ngoku, siyavuya ukunika ingxelo ngenkqubela kwiphondo laseNtshona Koloni ekuqalisweni kwezinto ezibalulekileyo kwisizwe.
Izikolo ezingahlawulisi fizi yokufunda kuzo (no fees schools)
Siyavuya ukwazisa ukuba izikolo ezingama-419 sezenze izicelo "zokungahlawulisi fizi yokufunda" ("no fee"), kwizikolo ezingama-424 esaye sazimema kuqala ukuba mazenze izicelo zoko. Oku kuthetha impendulo encomekayo engama-98.8%. Esi sibonelelo siyinxalenye yokuqaliswa komgaqo-nkqubo omtsha kazwelonke wokupheliswa kweefizi kwizikolo ezihlwempuzekileyo.
UMongameli waye wasayina uMthetho 24 wowe-2005 woFakelo lweZilungiso wezeMfundo (Education Laws Amendment Act 24, 2005) wama-26 Januwari kulo nyaka (ngo-2006) ukuvumela uMphathiswa weMfundo kazwelonke ukuba alathe iindidi zezikolo ekungavumelekanga ukuba zingabiza iifizi zokufunda.
Isebe lemfundo liya kwaba i-R29 yezigidi ngonyaka-mali ka-2006/07 ukwenzela eli linge, kulandelwa sisixa sama-R139 ezigidi kunye nama-R237 ezigidi ngowe-2007/08 nowe-2008/09 ngokulandelelanayo. Ngenxa yobuncinane bemali ekhoyo kunyaka-mali wowe-2006/07, i-WCED iya kujolisa kwizikolo zeprayimari ezihlwempuzekileyo njengenxalenye yesigaba sokuqala sokusungula "ukungahlawuliswa kweefizi" sisikolo.
I-WCED ngoko ke yaye yaya kwizikolo zeprayimari ezingama-424 ukuba zikhethe ngokuzithandela "ukungahlawulisi fizi" ukususela kowe-1 Meyi 2006. Inani elili-146,192 labafundi bafunda kwezi zikolo, bemele malunga ne-15.9% yabo bonke abafundi bethu.
Isebe lemfundo liya kuqhubela phambili ngokuqalisa ngokusungulwa kwalo mgaqo-nkqubo ngo-2007/08, ngenjongo yokufezekisa le nkqubo kunyaka-mali ka-2008/09, kwizikolo ezimalunga nama-37.6% abafundi bethu.
UPhuhliso lweMfundo yaBasaqalayo (Early Childhood Development)
Siya kuqhubela phambili ukugxila kuPhuhliso lweMfundo yaBasaqalayo (Early Childhood Development) ngokungqamene nezinto eziza kuqala ngokubaluleka kunye nesiCwangciso sethu soPhuhliso lweZakhono zoLuntu (Human Capital Development Strategy). Oku kuya kuquka ukugcina inkxaso-mali yethu eyandisiweyo ephakathi kwe-R6 ne-R8 yamaziko e-ECD akwindawo zoluntu oluhlwempuzekileyo. Sijonge kananjalo ekwandiseni isabelo esenzelwe ukuqeqesha ootitshala beBakala R.
Inkqubo yeMfundo yeeMfuno eziZodwa (Special Needs Education)
Sikwinkqubo yokuqalisa umgaqo-nkqubo wemfundo kazwelonke oquka bonke abafundi ukulungiselela abafundi abaneemfuno zemfundo ezizodwa (special education needs). Iinkalo ekugxilwa kuzo (focus areasi) kulo nyaka ziya kuquka ukwandisa ukufikelela kwimfundo yeemfuno ezizodwa. Siye saba ngaphezulu kwesi-R7 sezigidi kolu hlahlo lwabiwo-mali ukwakha izikolo ezibini ezongezelelweyo zezakhono. Umngeni wethu ophambili kukuba sisenabafundi abangaphezulu kwama-3000 ebekunokuba ngcono ukuba bafakwe kwizikolo zethu zemfundo yeemfuno zemfundo ezizodwa.
IiNkqubo zeMfundo zoLawulo lweNgcaciso (Education Management Information Systems)
Ezinye izinto ezibalulekileyo ziquka uphuhliso lwenkqubo yemfundo yolawulo lwengcaciso (education management information system), eyaziwa ngokuba yi-EMIS. Siyavuya ukwazisa ukuba i-EMIS e-WCED ibona inkqubela emandla. Eyona projekthi yethu yakutsha nje yinkqubo entsha eyi-Learner Tracking System.
Le nkqubo, neyiyeyokuqala ngokohlobo lwayo eMzantsi Afrika, iyilelwe ukuphucula ukusebenza ngokukuko (efficiency) kunye nomgangatho wemfundo kwelaseNtshona Koloni. Le nkqubo iqulathe ncakasana iziko ledatha (database) elinye labo bonke abafundi abakwizikolo zikarhulumente kwelaseNtshona Koloni, ukususela kumaBakala R ukuya kwele-12. Eli ziko ledatha (database) liya kunika isixhobo esinamandla sezolawulo ezikolweni nakulawulo.
Siye sagqiba isigaba sokuqala sale projekthi ekuqaleni kwalo nyaka, esasiquka ukuzaliswa kweziko ledatha (database). Isigaba sesibini siya kuquka ukuhlalutya idatha nokuyenza ifumaneke xa kusenziwa izigqibo ngabezolawulo.
Xa sithetha ngomba wethekhinoloji yezengcaciso (information technology), siyavuya ukunika ingxelo yokuba senza inkqubela emandla ejolise ekuxhaseni ukufunda nokufundisa ezikolweni nakwiikholeji zethu, ngeeprojekthi zikaKhanya nezikaDassie kunye nangenkxaso yeShuttleworth Foundation.
Impumelelo emandla kunyaka ophelileyo iquka ukuqinisekisa ukuba zonke izikolo eziphakamileyo zinelabhoratri yekhompyutha, ukuxhasa ukuqaliswa kwekharityhulam kazwelonke kwiBakala 10 ukuya kwele-12. Ngoku sisaxoxa ngokubaluleka kokufaka iikhompyutha eziklasini kwizikolo zeprayimari ukuze abafundi bakwazi ukusebenza ngeeprogram ezilungiselelwe umfundi ngamnye (individualised programmes).
IZIKOLO EZISEBENZA NGOKUKUKO, INKXASO YOOTITSHALA NOPHUHLISO LOBUNKOKELI
Ootitshala bethu basengabona balulutho olumandla (most valuable assets) kwiinzame zethu zokufikelela kwimfundo esemgangathweni. Umoya wootitshala bethu, amabango abo emfundo, amava kunye nobuchule, zizalathiso eziphambili ezinokulindeleka zeziphumo ezisemgangathweni.
Okuhamba noku yinxaxheba karhulumente kuphuhliso oluthe rhoqo, inkxaso kunye nezinto eziluncedo eziye zabelwa izikolo nootitshala. Ubunkokeli, indlela yokuziphatha nendlela abaqeshwa abenza ngayo izinto ngokoqeqesho lomsebenzi zifaka igalelo elimandla kumgangatho weziphumo.
Ndiyavuya ngoko ke ukunika ingxelo yokuba kwi-WCED sekukufutshane ukuba kuphunyezwe imvumelwano phakathi komqeshi nomqeshwa kwiBhunga leMfundo lezoBudlelane emSebenzini (Education Labour Relations Council) (ELRC). Le mvumelwano ixhobisa ngezomsebenzi (career pathing) ukulungiselela ootitshala bezikhundla abakwinqanaba lokuqala (post level one teachers), ngokunjalo nonyuselo-mivuzo ngokukhawulezileyo (accelerated salary progression) lwabo bonke ootitshala abakumanqanaba athile omvuzo.
Le mvumelwano inika isikhundla esitsha sikaTitshala owoNgameleyo (Master Teacher). Singabonyusela ooTitshala aBaneQhuzu kwiNqanaba loMvuzo 8 ukuya kutsho kwisikhundla sikaTitshala owoNgameleyo kwiNqanaba le-9 loMvuzo, ukuba bayayiphumeza imiqathango egqitywe yiNkqubo eBanzi yoLawulo lweMigangatho (Integrated Quality Management System) (IQMS).
Imvumelwano ngonyuselo-mivuzo olukhawulezileyo (accelerated pay progression) ngoku ivumela ootitshala baqhubele phambili ngokukhawulezileyo ukuya kutsho kwinqanaba elithile lomvuzo, umzekelo, ngeenotshi ezintathu emva kweminyaka emithathu yentsebenzo entle. Ootitshala banokuthi kananjalo bazuze ukunyuka ngeenotshi ezintathu kwithuba leminyaka emihlanu, umzekelo, ukuba bazuze iintlelo zentsebenzo ezintathu ngalo eli thuba.
Eli linge liyinxalenye ye-R4.2 yeebhiliyoni ezabelwe ukuphucula imivuzo yootitshala kuzwelonke. Sikholelwa ukuba le mvumelwano iya kuhamba umgama omde ekukhuthazeni ootitshala ukuba benze kangangoko banako, ukuze isebe lemfundo libavuze ngemisebenzi yabo.
Kwimeko engophuhliso lootitshala, ndifuna ukugxininisa imfuno yokuba ubudlelane bethu nobemibutho yethu yabaqeshwa mabuguquke. Ndifuna ukuvakalisa umnqweno ongazenzisiyo wokuba sifanele ukuba sidibane kancinane kwi-ELRC size sidibane qho ukuthatha izigqibo ngemisebenzi ngokumanyeneyo ukukhokela inguqu kwezemfundo kwiphondo lethu.
Ngeli lixa kwelinye icala kufuneka siqinisekise ukuba iimeko zengqesho yootitshala ziqhubela phambili ukuphucuka, ndiye ndafunda kuhambo lwam oluya e-UK kunyaka ophelileyo, ukuba eyona nto ibalulekileyo kwimpumelelo engama-80% yezikolo, BUBUNKOKELI.
Sinemeko apho abantu abaninzi bakhuphisana ngokufumana izikhundla ngolona hlobo, ngamanye amaxesha ngokungalunganga. Bekukhe kwakho neemeko zokunyoba eziye zabandakanyeka.
Kunyaka ophelileyo ndiye ndafunda ngengcamango engoLawulo lweZikolo njengeShishini (School Business Management), kunye nesiphumo esihle oku kuye kwanaso kumoya wokuzithemba wabo baye bathatha inxaxheba kwiindidi ndidi zeekhosi kwaneeprogram ezahlukeneyo. Andizami kuthi izikolo ngandlela ethile "ngamashishini" koko endikuthethayo kukuba mazilawulwe ngokufanelekileyo ngokwemithetho-siseko yezolawulo eyaye yalingwa yavavanywa.
Uninzi lwabaphathi bezikolo ezingamashishini e-UK, ababekade bengamagosa okwamkela iindwendwe (receptionists), oomabhalane (secretaries) okanye abezolawulo (administrators), ngoku bafakwe kwiikomiti zolawulo lwezikolo (school management teams), nanto leyo esisenzo esihle kakhulu. Ngoku sixoxa ngeforam yoomabhalane bezikolo kunye nabezolawulo (administrators), ukugaya iimbono zabo ngekharityhulam enokulandelwa ukulungiselela abaphathi bezikolo (school managers), enokufundiswa ziikholeji ze-FET. Le khosi ihamba nesatifikethi iya kulingwa (piloted) kwikota yesibini ka-2007. Amahlakani ethu yi-South African Bursars of Independent Schools of South Africa, i-National College of School Leadership, e-Manchester Metropolitan University kunye ne-Institute of Administrative Management.
Ikomiti yeprojekthi iqhubela phambili kakuhle kwaye namahlakani ethu aza kusebenzisana nathi ngoJulayi ukuqukumbela izicwangciso zethu zika-2007. Kubalulekile ukuba ikhosi yethu mayibe yevunyiweyo yi-NQF nakumazwe ngamazwe.
UKWABIWA KWEBHAJETHI KA-2006 / 07
Iphondo leNtshona Koloni liya kuchitha phantse i-R6.988 yeebhiliyoni (billion) kwezemfundo ngo-2006/07. Njengokuba ibhajethi luka-2005/06 lungama-30,4% xa lulonke kurhulumente wephondo, isixa-mali salo nyaka-mali senyuke kakhulu, senza ama-38% ohlahlo lwabiwo-mali lonke lwephondo, nolunyuke ngama-728 ezigidi xa kuthelekiswa nelonyaka-mali odlulileyo.
Zithethi eziHloniphekileyo, maLungu eNdlu yoWiso-mthetho noluntu jikelele, umba wokuba ezeMfundo zithatha esona sabelo sikhulu kibhajethi lonke lwephondo, sisenzo sobukhalipha nokuzinikela kwalo Rhulumente wePhondo ekuphuhliseni uluntu (human capital), ekukhuliseni kunye nokwabelana ngeKapa.
Le bhajethi nale ndlu zibeka uxanduva olumandla kum nakwi-WCED, kwaye kufuneka siyichithe le mali ngobulumko. Ndiyavuya ukunika ingxelo yokuba siye saceba inkcitho yethu ngobunono, phantsi kobunkokeli be-DDG enguJohan Fourie nekomiti yakhe, kwaye sikulungele ukuhlangabezana nezinto ozilindeleyo kunyaka-mali ka-2006/07.
Njengoko kunokulindelwa, izikolo eziqhelekileyo zikarhulumente ziya kufumana esona sabelo sebhajethi, esikwi-R5.7 yeebhiliyoni (billion). Ezinye iiprogram ezimandla ziquka izikolo zemfundo yeemfuno ezizodwa (special school education), ezolawulo ngokubanzi (general administration), iikholeji zemfundo noqeqesho oluqhubelekayo (further education and training colleges), nabeenkonzo zokuncedisa kunye neenkonzo ezinxulumene noko (auxiliary and associated services), eziya kufumana izixa-mali ezingama-R382.4 yezigidi, R264.7 yezigidi, ama-R259.9 ezigidi kunye nama-R207.2 ezigidi ngokulandelelanayo.
Ezinye izinto ezinokukhankanywa ziquka, njengoko kubonisiwe ngaphambili, isibonelelo semali esisodwa sokwenza ukuba siqalise izikolo "Ezingahluwulisi zifizi". Eli phondo liye lenza isibonelelo sama-R29.3 yezigidi ukuphumeza le njongo ngo-2006/07. Iinkqubo zolwabiwo ziya kwanda ngonyaka ngamnye kwizikolo ekungahlawuliswa fizi kuzo ukuya kufikelela kuma-R404.4 ezigidi ngethuba le-Medium-Term Expenditure Framework (MTEF), ukususela ku-2006/07 ukuya ku-2008/09. Izixa-mali ziya kuba ngama-R527 ngo-2006/7, zonyuke ukuya kutsho kuma-R554 ngo-2007/8 zize zibe ngama-R772 ngo-2008/9.
I-WCED iya kubonelela ngenkxaso eyandisiweyo kwizikolo ezazisaya kuvinjwa amathuba ngaphambili ngokuzabela inkxaso-mali yemimiselo nemigangatho engumlinganiselo (benchmark norms and standards subsidy) engama-R527 kumfundi ngamnye kuzo zonke izikolo ezibhengezwe "njengezingahlawulisi fizi".
Siyasandisa isabelo sethu sisonke seBakala R ngo-49% ukususela ku-2005/06 ukuya kwi-R107.4 lezigidi ku-2006/07, nto ke leyo ebonisa ukukhathala okwandileyo ngophuhliso lwemfundo yabasaqalayo (early childhood development). Eli phondo liya kuchitha ama-R534.3 ngethuba lokusebenza kwe-MTEF ukuqinisekisa ukuba inani elandayo labafundi bafumana ukufikelela kwiiprogram zeBakala R ezisemgangathweni.
Siya kuziphucula iimeko zokufunda ngokuchitha ama-R228.1 ezigidi ngethuba lokusebenza kwe-MTEF ekuzameni ukuhlangabezana nezinto zokusebenza ezisilelayo zesikolo kunye nezo zonakeleyo kwezo zikolo zazisaya kuvinjwa amathuba ngaphambili (disadvantaged schools).
Siya kuchitha ama-R68.8 ezigidi ngo-2006/07 ekuqalisweni kwekharityhulam kazwelonke ezikolweni. Ngoku sinika inkxaso-mali ngokutsha (recapitalising) zonke iikholeji ze-FET kwiphondo leNtshona Koloni, sisebenzisa inkxaso-mali kazwelonke ejongene neemeko ezithile (national conditional grant funding). Oku kuya kufikelela kuma-R70 ezigidi ngo-2006/07, nakuma-R227 ezigidi ngethuba lokusebenza kwe-MTEF.
Sisebenzisa ezi mali ukuxhasa ukubhaliswa okwandileyo kwabafundi, kuphuculwe amaziko eekholeji (kuqukwa iziseko zophuhliso (infrastructure) kunye nezinto zokusebenza) (physical infrastructure and equipment) kunye nokuqalisa iiprogram ezintsha nezale mihla.
Siceba kananjalo ukuchitha imali engaphezulu kwiibhasari ukulungiselela abafundi abasweleyo kwezemali kunye nabafundi abaqhuba kakuhle ezifundweni, ngokukodwa kwezo nkalo zezakhono eziyimfuneko kuqoqosho lwephondo ngoku.
Ukukhuthaza ukufikeleleka nobulungisa kwezengqesho kwiikholeji ze-FET (access and equity), isiCwangciso seNkxaso-mali yokuNceda ye-iKapa eliHlumayo (the iKapa eliHlumayo Financial Aid Plan) sinikezela ngama-R25 ezigidi ngo-2006/07 ngelokubonelela ngoncedo lwemali kubafundi beekholeji ze-FET abasweleyo. Siqikelela ukuba li-1,500 labafundi abaya kuzuza ngo-2006/07. Ngokucacileyo eyona ndlela ekukuphela kwayo yokwandisa ukufikelela kwiiKholeji zethu ze-FET ingakukwandisa inkxaso-mali kakhulu ukunciphisa iindleko zeekhosi okanye ukuqalisa isikim sebhasari/semali-mboleko kazwelonke ukulungiselela eli candelo. Ndiyayazi ukuba uMphathiswa weMfundo kazwelonke uNkosikazi Pandor uwunika ingqwalaselo lo mba.
Isigwagwiso (slogan) sentetho yam sithi "Omnye ufundisa omnye – sakha kunye ikhaya lokufunda lomntu wonke" ("Each one, teach one – together building a learning home for all".) Ngokolula izandla ngenjongo yokuzama ukunceda, siya kuvelisa amandla angenakuthinteleka anokusebenza kuphela ukwakha ubomi obungcono bomntu wonke.
Ndinqwenela ukubulela iNtsumpa-Jikelele uMnu Ron Swartz noMnu Paul Rockman kwi-Ofisi yakhe, oye wathi ngobudlelane bakhe obububo noNdlunkulu wam, uNazeema Hendricks, wanceda ekuqiniseni ubudlelane phakathi kwesebe lemfundo kunye ne-ofisi yam. Ndibulela ii-DDG, aBalawuli aBaziintloko kunye ne-WCED Broad Management, ngako konke ukusebenza kwabo nzima ekujongeni imingeni emandla esijongene nayo kweli phondo.
Nakuba kusekuninzi ekusafuneka kwenziwe, mininzi kananjalo imizekelo yendlela umsebenzi we-WCED omele ngayo amaphulo amatsha (cutting edge) okwenziwa kweenkonzo zemfundo elizweni lethu. Ngokumalunga noku ndinqwenela ukubulela i-1,500 leenqununu zezikolo; ootitshala bethu abazinikeleyo abangama-30,000; abahlohli neenkokeli zeekholeji ze-FET ezintandathu; kunye nabasebenzi bakarhulumente abangama-8,000. Nonke nenza umahluko kwimpilo yabafundi bethu abaphantse babe sisigidi.
Ndinqwenela ukubulela iikomiti zolawulo zezikolo kunye nezeekholeji ezibonisa obo bunkokeli bunobugcisa kwiindawo zoluntu ezininzi kwizithili zonke zephondo; onke amahlakani ethu, kumacandelo karhulumente nawamashishini abucala, kwezobudlelane emsebenzini, kuluntu kunye nakumaziko emfundo ephakamileyo, asebenzisana nathi ukuqinisekisa imfundo esemgangathweni yomntu wonke.
Ndinqwenela ukubulela uMphathiswa uNaledi Pandor. Ndiyayibulela indima yeKomiti yeSigxina yezeMfundo (Standing Committee on Education), ngokukodwa uSihlalo uNkskz Joyce Witbooi.
Ndenza umbulelo owodwa nomkhulu kubo bonke abaqeshwa be-Ofisi yam, o.k.t. uNazeema Hendricks, uMcebisi wam uArchie Lewis, uGert Witbooi, uJosie Malesela, uChris Gqogqa, uLydia Wabani, u-Anne Schlebusch, (osekondelwe kwi-ofisi yam), uJapie Lewin kunye noShadrack Nenzani. Enkosi kuDenise Alcock ngokusebenza endaweni yomntu osewafumana esinye isithuba somsebenzi – uBernadette Baxter (owayesaya kwaziwa njengokuba ngu-Engelbrecht).
Enkosi kumahlakani am akwisiGqeba seBhunga loLawulo (Executive Council) ngenkxaso yabo, abahlobo kunye nosapho lwam, abazali bam ngokukodwa inkosikazi yam nabantwana bam u-Aleya noJenna – ngokuqonda ukuba kuyimfuneko kum ngamanye amaxesha ukuba ndichithe iiyure ezinde ndikude kunani.
Somlomo, ekuqaleni kwale ntetho ndiye ndalatha ukuba ndiza kunika ingxelo ngezinto ezibe yimpumelelo, ndakhankanya imingeni, ndachaza isicwangciso sethu somsebenzi ndazisa nekomiti.
Inkqubo yethu ngokungenakuthinteleka ibanzi (holistic). Imiboniso engaphandle iphawule undoqo wenkqubo yethu: ukuba ubunalo ixesha lokuyibuka ubuya kuzibona ezemidlalo, umculo, ezingempilo qete (wellness) ezihamba nemiba ephathekayo yokunika inkxaso yokuqhubela phambili ngezifundo, ukhetho loqeqeshelo-msebenzi (learnership options) kunye nomboniso omfutshane (mini-showcase) wamaziko ethu emfundo ephakamileyo. Amanye amasebe karhulumente ayemelwe nanjengokuba kwakunjalo nakwii-SETA.
Somlomo, isihloko sentetho yanamhlanje nemixholo endiye ndayikhetha yonke inento yokwenza noluntu kunye nokukhula. Phakathi kwethu namhlanje sinabameli bekomiti emangalisayo ejongene nenguqu: sinamavolontiya alesayo, Somlomo, ootitshala abadla umhlala-phantsi, usihlalo wethu we-RCL, iinkokeli ze-COSAS nezeKomishoni yoLutsha yePhondo (COSAS and Provincial Youth Commission) iinkokeli zezoshishino nezemibutho yabasebenzi, abaxhasi ngemali, ababoneleli benkonzo bethu, amaziko ethu emfundo ephakamileyo, imibutho yethu yee-SGB, iinqununu zezikolo zethu ezitsha kunye nezezikolo ekugxilwe kuzo (focus schools), iinkokeli ezikwiikholeji ze-FET, amavolontiya aziingcali ezijongene nomenzakalo emsebenzini (volunteer occupational therapists), amagosa ethu, amahlakani azo zonke iintlobo kunye neqela labadlali abangamadoda/ amakhwenkwe kunye nababhinqileyo abanetalente nabaselula. Ndiyayazi ukuba ndinokuxhomekeka kananjalo kwisikhokelo se-ANC kunye namatsha-ntliziyo asebenza noluntu (foot soldiers) abalapha namhlanje ngobuninzi babo. Ndiyakhuthazeka yinkxaso yezicwangciso zethu kuzo zonke iinkalo zezopolitiko.
Aba bantu bamele ibutho lethu, Somlomo, la ngamavolontiya ethu. Eli liqela lethu, iihempe zabo zichaza into eninzi, ubuso babo, iintliziyo zabo ezinothakazelelo nee-CV zabo zigqibezela oko kungabalulwanga. Omnye umntu ufundisa omnye (Each one teach one). Sibanye/saam/together: YIBANI NGAMAVOLONTIYA.
Ukusuka kule ndawo intle ndimi kuyo, Somlomo, sikwazi kuphela ukubona abo basendlwini yowiso-mthetho. Kodwa ngaphandle kwi-Odithoriyam namhlanje bangaphezulu abakhoyo. Kwaye kwizitalato zethu, kwiifektri nasekuhlaleni kwethu, amawaka ngamawaka sele elungile. Yaye ukuba uza kwibrayi yethu kamva kuya kubakho iihempe ezibekelwe nina nonke kwiitsheyimba kananjalo. Ndinikhumbuza ngoko ke ngamazwi kaRaymond Williams athi nje ukuba kube nokucelwa umngeni kwizinto eziyimiqobo siyaqalisa ukuqokelela izinto ezilulutho ukulungiselela uhambo lwethemba/journey of hope/reis met hoop. Ngeli butho, Somlomo, manene namanenekazi, ngala mandla sinawo, singasilela njani ukwenza inguqu?